Ny fipoahana dia hanimba ny trano any Ekosy sy ireo fambara hafa nataon’i Jucelino Luz – JucelinoLuz
Ny fipoahana dia hanimba ny trano any Ekosy sy ireo fambara hafa nataon’i Jucelino Luz
Águas de Lindóia, 17 Aogositra 2021
Ny atiny nalaina avy tamin’ny taratasy fambara nalefa tany amin’ny toerana sy manam-pahefana samihafa manerantany.
Fipoahana amin’ny 18 Oktobra 2021, dia handrava trano efatra amin’ny faritra onenan’i Ayr, any Ekosy.
Misy ny fikasana hamono ny filohan’ny Bolivia, Luis Arce, izay tandindomin-doza ny ainy hatramin’ny 31 desambra 2021.
Vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro, ny tanàna any avaratra sy avaratra atsinanan’ny firenena dia hijaly noho ny fihenan’ny ravin-dranomandry maharitra. Hianjera ny trano, ho tandindomin-doza ny trano fitehirizana sy ny fantsona ary mila fanamboarana hatrany ny arabe. Hitombo be ny fikaohon-tany, mety hanenika ny vohitra sy hahafaty olona marobe ary mety hitohy ny fandravana any amin’ny faritra hafa any Russia hatramin’ny 31 Desambra 2021.
Tranga manodidina ny folo no ho hita ao Xian, tanàna avaratra andrefana misy ao amin’ny faritanin’i Shaanxi, ary roa ao Inner Mongolia, faritra iray any avaratr’i Shina, misy olan’ny Covid19.
Erenhot, tanàna ao Mongolia anatiny izay mifanila amin’i Mongolia, izay hotaterina manomboka ny 13 Oktobra 2021
Ny krizy any Shina dia mety hiteraka olana lehibe amin’ny 12 martsa 2022, ary noho izany, hidina amin’ny fianjerana ara-toekarena eo anelanelan’ny Oktobra sy Novambra 2022 – raha tsy misy ny vita.
Iray amin’ny CPI hafahafa (Vaomieram-panadihadiana parlemantera) any Brezila, te-hanandrana sy hanao heloka bevava amin’ny olona marina sy tsy manan-tsiny, ary miaro ireo izay nanararaotra ny harena ary nanao fanodikodinam-bola nataon’ny Ben’ny tanàna sy Governora sasany. Ny tanjon’ny CPI dia ny fiampangana ny filohan’i Brezila ho famonoana olona, ​​na izany aza, adinon’izy ireo ny nanampy ny anarany (ampahan’ny Senatera, ampahan’ny solombavambahoaka ary governora), izay nangina nandritra ny herintaona mahery, namily ny loharanom-bola tamin’ny kitapom-bolam-panjakana. Volam-bahoaka, vola an’ny vahoaka Breziliana. Tsy mitombina ny fanendrikendrehana, vatana hajaina toy ny Filan-kevitry ny Fitsaboana Federaly, izay nanohana hatrany ny tombotsoan’ny etika, ho an’ny fametahana fanafody mahomby sy ny fahalalahana hiasa amin’ny dokotera – tsy etika sy mampidi-doza, io no izy vondrona mpanao heloka bevava izay mandray ny lalàna, mamaky ny lalàm-panorenana Breziliana, hiarovana ny heloka bevava voalamina ao amin’ny firenena. Ny Breziliana rehetra dia tokony hiara-mangataka ny fanafoanana sy ny fanafoanana ny vato nomena an’ireo mpanao politika sy manampahefana ireo, izay tsy manao na inona na inona hamahana ny olana any Brezila. Raha ny marina, ny ampahany amin’ny lalàna sy didim-pitsarana noforonin’ireto mpanao politika ireto dia tsy mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana – satria tsy mankasitraka ny Breziliana na ny firenena izy ireo – ny tiako holazaina dia izy ireo ihany. Ary misy ny fambara fa miara-miasa amin’ny mpikambana sasany amin’ny fahefana hafa izy ireo. (Judiciary and Legislative). Raha tsiahivina fotsiny fa ny krizy ara-toekarena, ny olan’ny virus Covid19, ny tsy fahamarinan’ny vaksiny dia hataon’ireto olona ireto (Politika), noho izany, miafina ny vatonao, saingy azo ovaina amin’ny fifidianana manaraka io, tsy ny fifidianana ireo solontena ireo na ny taranany (na nasehon’izy ireo), izay tsy manao zavatra tsara ho an’i Brezila mahafinaritra.
Ny lakana hitaterana olona 11 amin’ny reniranon’i Parnaíba (PI) dia hilentika amin’ny 17 Oktobra 2021 Mpandeha enina no ho tafavoaka velona. Fa 5 kosa no hanjavona, ao anatin’izany ny renim-pianakaviana iray izay hanandrana hanavotra ny zanany vavy 5 taona. Julianne Bezerra Magalhães dia manambady an’ny tompona lakana, Dárcio Saraiva Martins, ho be lanja ny lakana, ary ny toetry ny andro no mety hahatonga ny rano hilentika.
Ireo vita vaksiny farafahakeliny fatra vaksiny misy any Italia (Pfizer / BioNTech, Moderna, Oxford / AstraZeneca ary Janssen) dia olona 46,2 tapitrisa, izay maneho 85,71% ny mponina mihoatra ny 12 taona. Ary hisoratra anarana any Italia manodidina ny 70 ny fahafatesan’i Covid-19 manomboka ny faha-16 ka hatramin’ny faha-19 Oktobra 2021, izay mampiseho mazava fa tsy mandeha ny vaksininy, ary eo amin’izao tontolo izao dia mamitaka ny mponina izy ireo, rehefa manamarina fa mamorona Tavotra sy Variants. Ary te hamitaka ny olona amin’ny doka fahatelo, fahefatra, fahadimy ary ilay antsoina hoe Sanitary Passport – mieritreritra fa hiaro ny vondrom-piarahamonina izy ireo. Ny miaro ny olona dia ny “Fanabeazana ara-pahasalamana sy ny fampiasam-bola amin’ny fikarohana – tsy misy idiran’ny politika” Raha atambatra, dia hanampiana 131655 ny fahafatesan’ny firenena amin’ny 19 Oktobra 2021.
Amin’ny 15 Oktobra 2021, mpandeha efatra no ho maratra ao anaty fiaran-dalamby Amtrak rehefa mifatratra amin’ny kamio stork izay ho tafahitsoka amin’ny fiampitana lalamby akaikin’i Thackerville, Oklahoma (Etazonia).
Ny filoham-pirenena ekoatoriana Guillermo Lasso dia mila manambara ny hamehana ao amin’ny firenena Andes amin’ny 18 Oktobra 2021, io hetsika io dia ho fihetsiky ny fiakaran’ny isan’ireo mpamono olona manerana ny firenena sy ireo heloka bevava hafa mifandraika amin’ny fanintonana izay hatao ao amin’ny firenena . Ahiana ho faty koa ny filoha hatramin’ny 5 Janoary 2022 ..
Handrava ny tandrefan’i India ny tondra-drano ary mety hahafaty olona 170 farafaharatsiny any amin’ny fanjakana andrefan’i Gujarat, Maharashtra, Karnataka ary Kerala. Ary afaka nitohy tamin’ny olan’ny gale, tafio-drivotra ary tondra-drano hatramin’ny 24 desambra 2021 io.
Nisy horohoron-tany mafy tany India tamin’ny 12 aprily 2022
Prof. Jucelino Luz – mpikaroka, mpanoratra, mpiaro ny tontolo iainana ary mpitari-dalana ara-panahy
Letupan akan memusnahkan kediaman di Scotland dan pertanda lain oleh Jucelino Luz
Splużjoni se teqred id-djar fl-Iskozja u omens oħra minn Jucelino Luz